टी-२० लिग गर्न सक्ने हैसियत नभएको क्यान! :: सीताराम कोइराला :: Setopati
क्यान अध्यक्ष चन्द भन्छन्- नेपालका कम्पनीले ६० लाख पनि दिन सक्दैनौं भने त के गर्ने!
नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले भारतीय कम्पनीलाई बिनाप्रतिस्पर्धा १० वर्षका लागि ४२ करोड रुपैयाँ लिएर नेपाल प्रिमियर लिग टी-२० क्रिकेट प्रतियोगिता (एनपिएल टी-२०) आयोजना गर्न दिने प्रस्तावको चर्को आलोचना भइरहेको छ।
क्यान आफैंले आयोजना गर्नुको सट्टा निजी त्यो पनि विदेशी कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिने प्रस्तावका कारण आलोचना भइरहेको हो।
सेतोपाटीलाई प्राप्त एनपिएल टी–२० को 'ड्राफ्ट'मा भारतीय कम्पनी सेभेन–थ्री-स्पोर्ट्स लिमिटेड (एस-थ्री) र क्यानबीच गत जनावरी ९ मै प्रारम्भिक सम्झौतापत्रमा (एमओयू)मा हस्ताक्षर भएको देखिन्छ। क्यान र एस-थ्रीबीच जुनियर क्रिकेट च्याम्पियनसिप आयोजना गर्ने विषयमा पनि एमओयू भएको थियो।
बिनाप्रतिस्पर्धा भारतीय कम्पनीसँग १० महिनाअघि नै प्रारम्भिक सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नु पर्नाको कारण हामीले क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दलाई सोधेका छौं।
'सुरूमा हामीले नेपालमा फ्रेञ्चाइज लिग गर्ने एक आयोजकसँग प्रस्ताव राखेका थियौं, उहाँले वर्षको ६० लाख पनि दिन सक्दिन भन्नु भयो,'अध्यक्ष चन्दले भने, 'तर हामीले नेपाली क्रिकेटको विकासका लागि सकारात्मक सोच राखेरै भारतीय कम्पनीसँग कुरा गरेका हौं।'
चन्दले बिनाप्रतिस्पर्धा भारतीय कम्पनीलाई आयोजना अधिकार दिने प्रस्तावको विषयमा स्पष्ट जवाफ दिन सकेनन्।
भारतीय कम्पनीले एनपिएल टी-२० आयोजनाको अनुमतिका लागि पहिलो वर्ष २ करोड रुपैयाँ दिने प्रस्तावमा उल्लेख छ। दोस्रो वर्ष २ करोड, तेस्रो वर्ष २ करोड ५० लाख, चौथो वर्ष ३ करोड र पाँचौ वर्ष ४ करोड २० लाख रुपैयाँ क्यानलाई दिने भनिएको छ।
छैठौं वर्ष पनि ४ करोड २० लाख, सातौं र आठौं वर्ष समान ५ करोड १० लाख प्रदान गर्नेछ। नवौं सिजन ५ करोड ९० लाख तथा दशौं सिजनमा सबैभन्दा बढी ७ करोड ५० लाख गरी कुल ४२ करोड क्यानलाई बुझाउने उल्लेख छ।
देशको आधिकारी फ्रेञ्चाइज लिगबाट प्राप्त यो रकम न्यूनतम भएको कतिपयको भनाइ छ।
धनगढी प्रिमियर लिग (डिपिएल) आयोजक सुवास शाही एनपिएल टी-२० का प्राप्त हुने रकम अत्यन्त न्यून भएको बताउँछन्।
तपाईंलाई आयोजना गर्ने अनुमति दिए कति रकम दिनु हुन्थ्यो?, भन्ने प्रश्नमा उनको उत्तर छ,'पहिलो वर्षमा २ करोड र १० वर्षमा ४२ करोडभन्दा बढी नै दिन्छु। एनपिएल टी-२० का लागि यो रकम न्यून हो भन्ने मेरो भनाइ हो।'
अध्यक्ष चन्द भने यो कुरा मान्न तयार छैनन्।
'प्राप्त हुने रकम सार्वजनिक भएपछि कतिपयले यति दिन्छु उति दिन्छु भनिरहेका छन्। पहिला कुरा गर्दा हच्किने अनि अहिले यति रकम दिन्छु भन्नु हावादारी कुरा हो,' चन्दले भने,'कतिपय फ्रेञ्चाइज लिगले अहिले पनि पुरस्कार रकम दिन सकेका छैनन्। खेलाडीले सयमैमा पैसा पाएका छैनन्। अझ केही आयोजक साथीले घाटा परेकाले जग्गासमेत बेचेको भन्ने अन्तर्वार्ता दिएको देखेको छु। त्यसैले कुरा सतहमा आएपछि जे पनि बोल्न भएन।'
क्यान निलम्बनको अवस्था समेत नेपालमा तीन वटा फ्रेन्चाइज क्रिकेट लिग आयोजना भएका थिए। धेरैले क्यानको निलम्बन फुकुवा भएपछि एनपिएल क्यानले नै आयोजना गर्छ भन्ने अपेक्षा गरेका थिए। तर क्रिकेटको नियामक निकाय क्यान एनपिएल आयोजना विदेशी कम्पनीलाई दिन हतारिरहेको छ।
के क्यानसँग फ्रेञ्चाइज क्रिकेट लिग आयोजना गर्ने हैसियत छैन?
'नेपालमा भइरहेकाजस्ता सामान्य लिग हामी आयोजना गर्न चाहँदैनौ। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको लिग आयोजना गर्न हामीले भारतीय कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव ल्याएका हौं,' चन्दले भने।
उनका अनुसार तीन वटा कारणले एनपिएल भारतीय कम्पनीलाई दिन लागिएको हो।
'एउटा, एनपिएल टी–२० लाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने भनेका छौं। दोस्रो, हामी आयोजना अनुमति दिएर आम्दानी गर्न चाहन्छौं। अनि तेस्रो, आयोजकबाट पूर्वाधारको पनि विकास गर्न चाहान्छौं,' उनले भने।
डिपिएल आयोजक शाही क्यानले गलत तरिका अपनाएको ठान्छन्।
'हामीलाई त लागेको थियो क्यानले नै एनपिएल आयोजना गर्छ। तर क्यानले अपारदर्शीक काम गर्न खोज्दैछ,' उनले भने, 'आयोजना दोस्रो कम्पनीलाई दिनु नै छ भने पारदर्शी तरिकाले ग्लोबल टेन्डर आह्वान गर्न सकिन्छ। यसो गर्दा क्यानलाई नै फाइदा हुने हो।'
एनपिएल ड्राफ्टमा कम्तिमा दुई वटा क्रिकेट मैदानको स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव छ। तर कुन-कुन मैदानको विषयमा भन्ने उल्लेख छैन। यस विषयमा अध्यक्षले पूर्ण सम्झौता भइसकेपछि खुल्ने बताउँछन्।
एनपिएलको ड्राफ्टमा अन्य लिगलाई मान्यता दिन नपाइने उल्लेख छ। त्यो हुँदा अहिले भइरहेका धनगढी प्रिमियर लिग, पोखरा प्रिमियर लिग र एभरेष्ट प्रिमियर लिगले आयोजना मान्यता पाउँदैनन्।
यसअघि राष्ट्रिय स्तरमा सञ्चालन हुँदै आएका यी लिगको भविष्य पनि एनपिएल टी–२० पछि अन्योलमा पर्ने देखिन्छ।
अध्यक्ष चन्द पनि कुनै पनि देशको एउटामात्र आधिकारीक राष्ट्रिय टी–२० लिग हुने बताउँछन्।
'कुनै देशमा एकभन्दा बढी राष्ट्रिय टी-२० लिग हुन सक्दैन,' उनले भने, 'अहिले भइरहेका लिगलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने कुरा छ। हामी भइरहेका लिगलाई रोक्न त सक्दैनौं। तर क्षेत्रीय लिगको अवधारणमा गराउने वा अन्य कुनै विकल्पमा सोच्न सकिन्छ।'
डिपिएलका आयोजक शाही नेपाली क्रिकेट विकासमा योगदान दिएका लिगको अवमूल्यन गर्न नमिल्ने तर्क राख्छन्।
'क्यान निलम्बनको अवस्थामा हामीले राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिता आयोजना गर्‍यौं। हामी फर्म्याट परिवर्तन गर्न तयार छौं तर क्षेत्रीय लिग नै किन भन्न पर्‍यो,' उनले भने।
एनपिएल टी-२० को नियम कसले बनाउने, फ्रेञ्चाइज टिम कस्तो हुने र लिगमा नेपाली खेलाडीको अवस्था कस्तो हुने अझै स्पष्ट छैन।
क्यान अध्यक्ष चन्द लिगको नियम क्यानले नै बनाउने बताउँछन्।
'प्राविधिक समिति बनाएर नेपाली क्रिकेटको हितमा हुने गरी नियम बनाउछौं,' उनले भने,'एनपिएलमा छनोट हुने नेपाली खेलाडीलाई कम्तिमा ५ लाख रुपैयाँ दिने हाम्रो प्रस्ताव छ।'
हेर्नुहोस् एनपिएल टी–२० को 'ड्राफ्ट' :-
प्रकाशित मिति: आइतबार, मंसिर ७, २०७७, ०४:४०:००